हिमाल खबरपत्रिका | बोनसको लोभमा व्याजमा उपेक्षा
आफ्ना कर्मचारीको बोनस घट्ने डरमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क व्याजदर नियमनमा रुचि देखाइरहेको छैन।
नेपालको वित्तीय प्रणालीमा व्याजदरको उतारचढाव जति उदेकलाग्दो छ, त्योभन्दा ठूलो रमिता नियमनकारी निकाय नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले देखाएको छ। राष्ट्र ब्याङ्कको निष्त्रि्कयताकै कारण नेपालको वित्तीय क्षेत्रका लागि तरलता (खर्चयोग्य रकम) को संकुचन र अधिकता नियमित रोग बनेको छ। मुद्रास्फीतिदर भन्दा केही माथि रहनुपर्ने बचतको व्याजदर एक्कासी तल र्झ्ने र माथि चढ्ने पीङ जस्तो मच्चिइरहँदा पनि केन्द्रीय ब्याङ्क मौन छ।
बचतकर्तामा वित्तीय प्रणालीप्रति भरोसा जगाउने माध्यम र निजी लगानीकर्तालाई प्रोत्साहित गर्ने प्रमुख औजार हो– व्याजदर। व्याजदरको स्थायित्वले दिगो बचत र स्तरीय लगानीको सम्भावना बढाउँछ। तर, नेपालमा भने यो अभ्यास उल्टो हुँदै आएको छ। खुला बजार प्रणालीले तय गर्ने भनिए पनि व्याजदरको 'खेल'मा राष्ट्र ब्याङ्क कर्मचारीहरूको अनौठो अभिरुचि देखिन्छ। ब्याङ्कहरू तरलता अभावमा परेका बेला धेरै व्याजमा नगद प्रवाह गरी पैसा कमाउने केन्द्रीय ब्याङ्क वित्तीय क्षेत्रको अधिक तरलता प्रशोचन (बजारमा धेरै भएको पैसा केन्द्रीय ब्याङ्कले लिने कार्य) मा भने पछि सर्दै आएको छ।
यस्तो किन हुन्छ त? नाम नखुलाउने शर्तमा राष्ट्र ब्याङ्कका एक पूर्व डेपुटी गभर्नर भन्छन्, “आफ्नो वार्षिक बोनस घट्न नदिने लोभमा केन्द्रीय ब्याङ्कको उपल्लो तहका कर्मचारीहरू नै बजारको तरलता व्यवस्थापन गर्न चाहँदैनन्।” उनको भनाइमा बजारमा अधिक तरलता हुँदा चार–पाँच प्रतिशतको व्याजदरमा राष्ट्र ब्याङ्कले पैसा लिने र अभाव हुँदा सात–आठ प्रतिशतमा दिने हो भने नेपालको व्याजदरले स्थायित्व पाउन सक्छ।
कर्मचारीहरूकै 'बोनस लोभ'का कारण गभर्नर डा. युवराज खतिवडाले गत वर्षको मौद्रिक नीतिमै उल्लेख गरेको 'व्याजदर करिडोरमार्फत मुद्रा बजारसहित समग्र वित्तीय प्रणालीको व्याजदर एउटै ट्रयाकमा हिंडाउने' नीतिले गति लिएको छैन। राष्ट्र ब्याङ्कका एक अर्का पूर्व अधिकारी भन्छन्, “बोनस घट्ने थ्रेट पालेका कर्मचारीहरूको असहयोगमै गभर्नरले चाहेर पनि यसतर्फ गति लिन नसकेको हुनुपर्छ।” राष्ट्र ब्याङ्कको एक स्रोत अनुसार चालु आवको मौद्रिक नीतिमा उल्लेख भएबमोजिम ब्याङ्कहरूलाई आ–आफ्नो आधार व्याजदर तोक्न निर्देशन भने असोजभित्रै ल्याउने तयारी छ। त्यसो भएमा सबै ब्याङ्कले आफ्नो खर्चको अवस्था अनुसार कर्जाको न्यूनतम व्याजदर सार्वजनिक गर्नुपर्छ।